VHS ka DVD Mac / Win - tọghata na Nyefee VHS ka DVD
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata na Nyefee VHS ka DVD (Windows 8 gụnyere)
VHS, mkpụmkpụ maka Video Home System, bụ a n'ji-larịị ndekọ videocassette ọkọlọtọ mepụtara JVC (Victor Company nke Japan). Ebe ọ bụ na 1970, VHS kemgbe na-achị n'ụlọ video format, na-adịgide adịgide ofụri teepu format oge. Mgbe 2000, DVD (Digital vasatail Disc) na elu video àgwà dochie VHS dị ka ihe ka mma usoro nke nkesa usoro. N'ihi ya, ọ bụ ezi echiche iji tọghata VHS ka DVD bụrụ na i nwere erubeghị.
Iji tọghata ma nyefee VHS ka DVD, anyị ukwuu nwere ike ikwu Wondershare DVD Creator-enyere gị aka tọghata VHS na analọg camcorder etere ka DVD na elu àgwà (Windows 10 gụnyere). Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, biko amalite DVD Creator for Mac .Onye ụzọ nyefee VHS ka Mac OS X na ọkụ ya DVD (Mountain odum akwado) bụ otu na Windows version. Na-esonụ ndu, anyị ewere Windows screenshots. Dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
Free download VHS ka DVD software ikpe version:
Otú nyefee VHS ka DVD Nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Ibu Ibu VHS videos ka usoro ihe omume
Mgbe ị nyefee VHS teepu gị na kọmputa, biko ẹkedori a usoro. The n'okpuru interface bụ ihe ị banyere ịhụ: pịa "Import" ka ịgbakwunye VHS faịlụ mkpa ka ị ọkụ n'ime usoro ihe omume. Ha ga-egosi na thumbnails na ekpe. Ị nwere ike ịlele videos na nri ị na-elele windows na ịgbanwe video olu unu kpamkpam.
Atụmatụ: I nwekwara ike ịgbakwunye photos na-eme ka a foto DVD ngosi mmịfe ma ọ bụ ikpokọta foto na vidiyo na ọnụ maka mma DVD Ndinam. The green ebe na ala na-egosi na size gị video.
Nzọụkwụ 2. Dezie VHS videos-ewu na-video nchịkọta akụkọ
Họrọ a video clip, see edit button imeghe Video Dezie window na DVD burner. Ebe i nwere ike hazie gị vidiyo site cropping, n'usoro n'usoro, trimming, na-agbakwunye mmetụta, na-agbakwunye watermarks na na.
Nzọụkwụ 3. Preview na ọkụ VHS ka DVD
Pịa ịhụchalụ n'ihi nke edezi bụrụ na i nwere ike mma ya na a ụfọdụ ụzọ. N'ikpeazụ, họrọ mmepụta Ọkpụkpọ na parameters na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike dị nnọọ pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ.
Na ọrụ Wondershare DVD Creator, ị nwere ike mfe tọghata VHS ka DVD nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe nkiri gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Atụmatụ maka akada video si VHS teepu
The ngwaọrụ gị mkpa: VHS VCR, video kpọọ ngwaọrụ na video kpọọ software. Soro ntuziaka n'okpuru
1. Mee gị video kpọọ ngwaike na ọ ga-ghọtara site PC.
2. Ijikọ na RCA video (edo edo USB) mmepụta na RCA audio (-acha ọcha na-acha uhie uhie cables) ndapụta na VHS VCR ka RCA ntinye na kpọọ ngwaọrụ.
3. agba ọsọ gị video kpọọ software. Ọ pụrụ ịbụ software na-abịa na gị video kpọọ ngwaọrụ, ma ọ bụ VirtualDub (Free), ma ọ bụla video akada software na kọmputa gị. Mee ntọala tupu akada ọ dị mkpa.
4. Họrọ "Capture" na video kpọọ software ma họrọ "Play" na VHS VCR.
5. Ozugbo gị video weghaara gị ike mbanye, o nwere ike mgbe ahụ a ga dị n'ime a DVD-ere ọkụ software dị ka Wondershare DVD Creator.